Umaki: woocommerce | Martech Zone
I-Whatagraph: Iziteshi Eziningi, Ukuqapha Idatha Yesikhathi Sangempela & Imibiko Yama-ejensi Namaqembu
Ngenkathi cishe yonke inkundla yokuthengisa ne-martech inezindawo zokubika, eziningi eziqinile, ziyasilela ekunikezeni noma yiluphi uhlobo lombono ophelele wokumaketha kwakho kwedijithali. Njengabakhangisi, siyazama ukuhlanganisa ukubika ku-Analytics, kodwa noma kunjalo kuvame ukukhethekile ezintweni ezenziwa kusayithi lakho kunazo zonke iziteshi ezihlukene osebenza kuzo. Futhi... uma uke waba nenjabulo yokuzama ukwakha i- bika endaweni yesikhulumi,
Amaphoyinti okugcina we-UPS API kanye nekhodi yokuhlola yesampula ye-PHP
ULwesibili, April 12, 2022 ULwesibili, April 12, 2022 Douglas Karr
Sisebenza neklayenti le-WooCommerce njengamanje ukuqinisekiswa kwekheli lalo lokuthumela le-UPS nokubalwa kwezindleko zokuthumela kuyekile ukusebenza. Udaba lokuqala esiluhlonze kwakuyi-plugin ye-UPS yokuthumela ababenayo yayiphelelwe yisikhathi futhi isizinda esiyinhloko senkampani esiyithuthukisile sasinohlelo olungayilungele ikhompuyutha... akulona neze uphawu oluhle lokho. Ngakho-ke, sithenge i-plugin ye-WooCommerce UPS njengoba isekelwa kahle abathuthukisi be-Woocommerce. Njengoba isayithi lingawaqinisekisi amakheli noma lingahlanganisi ukuthumela, yethu
Iwebhusayithi ye-Elementor Cloud: Yakha Indawo Yakho Ye-WordPress ye-Elementor Kulokhu Kusingathwa Okuzinikezele Okusekelwe Ngokugcwele
NgoMsombuluko, Mashi 7, 2022 NgoMsombuluko, Mashi 7, 2022 Douglas Karr
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bengilokhu ngisiza iklayenti ekwenzeni iwebhusayithi yalo ibe ngcono eyakhelwe ku-WordPress futhi isebenzise i-Elementor Builder… engikholwa ukuthi iyona engcono kakhulu ongayithola. Ibhalwe njengenye yama-plugin ami anconyiwe e-WordPress. Ngesinye isikhathi, i-Elementor Builder yayiyisengezo esihle kunoma iyiphi itimu. Manje, umakhi useqine kangangokuthi ungakwazi ukwakha noma yimuphi umklamo osuka endikimbeni ngoba unobubanzi obunjalo.
I-Spocket: Yethula futhi Uhlanganise Ngokungenamthungo Ibhizinisi Elilahlayo Nge-Ecommerce Platform Yakho
NgoLwesihlanu, Novemba 26, 2021 NgoLwesihlanu, Novemba 26, 2021 Douglas Karr
Njengomshicileli wokuqukethwe, ukuhlukanisa imali yakho engenayo kubaluleke kakhulu. Lapho besinemithombo yezindaba embalwa emikhulu emashumini ambalwa eminyaka edlule futhi ukukhangisa bekunenzuzo enkulu, namuhla sinezinkulungwane zemithombo yezindaba nabakhiqizi bokuqukethwe yonke indawo. Akungabazeki ukuthi ubonile abashicileli abasekelwe kwezokukhangisa kufanele behlise abasebenzi eminyakeni edlule… futhi labo abasaphila babheke kwezinye izindawo ukukhiqiza imali. Lokhu kungaba uxhaso, ukubhala izincwadi, ukwenza izinkulumo, ukukhokhelwa
I-WP Konke Ngenisa: Indlela Yokungenisa Ngenqwaba Isigaba Se-Taxonomy Ku-WordPress kusuka ku-CSV
NgoMsombuluko, Novemba 15, 2021 NgoMsombuluko, Juni 27, 2022 Douglas Karr
Ifemu yami isebenza ekuhlanganiseni nasekusetshenzisweni kwe-WordPress okukhulu kakhulu, kufanele ithuthe amathani edatha kusuka ezimeni zakudala noma olunye uhlelo lokuphatha okuqukethwe (CMS) ngokuphelele. Ngokuvamile, lokhu kuhlanganisa ukungenisa imikhiqizo ye-WooCommerce, ukwengeza izindawo ohlotsheni lweposi langokwezifiso, noma ukwakha intela ngokufaka okwaziwayo. Uma ubufuna, ngokwesibonelo, ukwengeza izigaba ngezwe, isifunda, noma isifundazwe... ungase usebenze ku-WordPress amahora amaningi ufaka idatha. Ngokujabulisayo, kukhona